Home သတင်း ဂျာနယ် သီချင်း ဗွီဒီယို အားကစား မြန်မာစာအုပ်စင် ဖုန်းဆော့ဝဲများ ဆေးမြီးတို
ခရစ်ယာန်တွေမှာ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာကို ရှေးက ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ယာဇ်ပရောဟိတ်များ နှုတ်နဲ့အာဂုံဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပေ၊ပရပိုက်၊ သားရေပြား တွေပေါ်မှာ ရေးသားမှတ်တမ်တင်ထားပေမဲ့ အုပ်စိုးသူမင်းများ၊ သာသနာပိုင်ဘုန်းတော်ကြီးများကပဲ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ သာမန်လူများ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ရှုဖို့မပြောနဲ့ ကြားဖို့တောင် တော်တော်ခဲယဉ်းလှပါတယ်။ BC 1445 - BC400 ကာလအတွင်းမှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ ၃၉ကျမ်း ကို ဟီဘရူးဘာသာ (ဂျူးဘာသာစကား) နဲ့ စတင်ရေးသားပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်းကာလမှာ ဂျူးလူမျိုးများရဲ့ ဘာသာဖြစ်လို့ ဘာသာပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး၊ သခင်ယေရှုကာတိုင်မှာအသေခံပြီး AD30 နောက်ပိုင်း နှစ်၁၀၀အတွင်းမှာ ဓမ္မသစ် ၂၆ကျမ်းကို ဂရိဘာသာနဲ့ရေးခဲ့ပါတယ်။ ရိုမင်ကတ်သလစ်တွေမှာ - အပိုခရာဖာ APOCRYPHA (ဂျူးရာဇ၀င်) ၁၁ကျမ်း ပိုပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာ ဘုရားရဲ့သားတော်အဖြစ် လောကကိုကြွဆင်းလာပြီး ဂျူးလူမျိုး သာမက လူတိုင်း ကိုးကွယ်ရတဲ့ ဘုရားအဖြစ် ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော် Grace Period ကို ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်း သားကောင်များယာဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ရပ်တံ့စေပြီး ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ပြည့်စုံစေပါတယ်။ (1)
ဂျူးလူမျိုးများကတော့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကိုပဲ သုံးစွဲလျှက်ရှိပါတယ်။ အာရပ် မွတ်ဆလင်များက ဓမ္မဟောင်း၊ဓမ္မသစ်များ
ကို တမန်တော်မိုဟာမက်အားဖြင့် ပိုမိုပြည့်စုံတဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းစှာQur'an အဖြစ် အာရပ်ဘာသာစကားနဲ့ AD632 မှာပြုစုပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ သဘောကတော့ ဂျူး၊ အာရပ်၊ ခရစ်ယန်များ အားလုံးဟာ ထာဝရဘုရားခြင်းတူကြတယ်။ ဂျူးဘာသာက ရဟိုးဝါ လိုခေါ်တယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာများက အလ္လာအရှင်မြတ် လို့ခေါ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်တွေက ထာဝရဘုရား၊ သခင်ယေရှု၊ သန့်ရှင်သောဝိညာဉ် (၃)ပါးတစ်ဆူ အဖြစ် ခေါ်ဝေါကြတယ်။ ခြုံကြည့်ရင် ဒီဘာသာ၃ရပ် အခြေခံကတော့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း နဲ့ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက် နဲ့ ကျင့်ဝတ်များမှာ ကွဲလွဲမှုကြီးများ ရှိပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာ သမိုင်းမှာ အာရပ် နဲ့ ဂျူးလူမျိုး သမိုင်းမပါရင် မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောရပါမယ်။ (2)
St. Jerome ဂျာရောမ် c347-420
လက်တင်ဘာသာ ခရစ်ယာန် သမ္မာကျမ်းစာ ဘာသာပြန်သူအနေနဲ့ စိန့်အောဂတ်စတင်း နဲ့ စိန့်ဂျာရောမ် တို့၂ဦးတို့ဟာ ထင်ရှားပါတယ်။ ယခင်က ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ဟီဗရူး နဲ့ ဂရိ နှစ်ဘာသာနဲ့ ရေးသားထားတဲ့အချိန် လက်တင်ဘာသာနဲ့ ဘာသာပြန်ထားတာ အနည်းအကျဉ်းရှိပါတယ်။ စိန့် ဂျာရောမ် ကတော့ ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကို ဘုန်းတော်ကြီးကောင်စီခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို အခြားဘာသာများသို့ ပြန်ဆိုခြင်းခွင့်မပြုတဲ့ပါ။ ဟီဗရူး၊ ဂရိ နဲ့ လက်တင်ဘာသာ များနဲ့ AD1400 အထိ ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များသာ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စိန့်ဂျာရောမ် ဘာသာပြန်တဲ့ လက်တင်ဘာသာ သမ္မာကျမ်းစာကို နှစ်တထောင်လောက် (AD 400 to 1400) သုံးစွဲခဲ့တယ်ဆိုတာ တော်တော်အံ့သြဘွယ်ပါပဲ။ စိန့်ဂျာရောမ် ဟာ ဂရိလူမျိုးဖြစ်ဟန်ရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်က ရောမမြို့ကို ပညာသွားသင်ပြီး ဂရိ နဲ့ ဟီဗရူး၊ လက်တင်ဘာသာများ တတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ c478 နှစ်လောက်မှာ ရိုမင်ကက်သလစ်ဘုန်ကြီးအဖြစ် သိက္ခာတင်ခံရတယ်။ သူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ၊ နောက်လိုက်များ နဲ့ အတူနေထိုင်ရင်း သမ္မာကျမ်းစာ လက်တင်ဘာသာပြန်ရေးကို ဘ၀တလျှောက်လုံး သေသည်အထိ လုပ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။
Notes: သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ မူရင်း ဟီဗရူး နဲ့ ဂရိ (ဟေဗြဲ နှင့် ဟေလသပါဌိတော်) နှစ်ဘာသာကို ကျမ်းစာကျောင်းများမှာ နှစ်ချီသင်ကြားရပါတယ်။ လက်တင်ဘာသာလည်း သင်ရပါတယ်။ မြန်မာကျမ်းစာ ဆရာကြီးယုဒဿန်ဘာသာပြန်ရာမှာ မူရင်း ဟေဗြဲ နဲ့ ဟေလသ နှစ်ဘာသမှ တိုက်ရိုက်ပြန်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ ပြန်ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ရှေးခေတ်က သမ္မာကျမ်းစာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပုံနှိပ်ကြပေမဲ့ လက်ရေးနဲ့ရေးတာပဲများတယ်။ အလွန်အချိန်ကုန်ပြီး ကျမ်းစာကို လှပ၊ကြည့်ရှုဘွယ်ကောင်းအောင် Illumination & Rubrication ကနုတ်ပန်းများနဲ့ တောက်ပစေခြင်း၊ ရောင်စုံ စာလုံးများထည့်ရေးပေးခြင်း တွေလုပ်ပေးရတော့ ပိုပြီးအချိန်နဲ့ ငွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးလှပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ၊ အစိုးရအုပ်ချုပ်သူ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီးများ နဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူများလောက်ပဲ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေသိပ်မပေးနိုင်သူများကတော့ ရောင်စုံ၊ပန်းကနုတ်တွေ မထည့်ကြပါဘူး။
AD 1400 မှာ ဂူဒင်ဗက် ဆိုတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးတယောက် အခုခေတ်ပေါ် ခဲစာလုံးစနစ် ပုံနှိပ်စက်ကို စတင်တီထွင်ပါတယ်။ Gutenberg ပုံနှိပ်စက် တီထွင်ခြင်းကို တီထွင်မှုများသမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ကြာပါပြီ၊ ကာလာကောပီယာ နဲ့ အော့ဖ်ဆက်များ ပေါ်လာပေမဲ့ အခြေခံပုံနှိပ်နည်းကတော့ ဂူဒင်းဘတ်စနစ်ပါပဲ။ တီထွင်သူ ဂူဒင်းဘတ်ဟာ သမ္မာကျမ်းစာကို ရိုက်နှိပ်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားရပါတယ်။ ပထမဆုံး စာအုပ် ၁၃၅ အုပ်ကို အီတလီလုပ်စာရွက်များသုံးပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံမှာ ရိုက်နှိပ်ပါတယ်။ တပြိုင်တည်း ၄၅အုပ်ကို သားရေပြားပေါ်မှာ ရိုက်နှိပ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၁၂၇၂ မျက်နှရှိပြီး စာကြောင်း ၄၂ခု သုံးထားတဲ့အတွက် 42-line Bible လို့လဲခေါ်ကြပါတယ်။ ရိုက်ပြီးချိန် မှာကြားသူများအလိုအတိုင်း ရောင်စုံစာလုံး၊ ပန်းကနုတ်များ လုပ်ပေးပြီး စာအုပ်ချုပ်ရပါတယ်။ အားလုံး တချက်တည်း ရောင်းကုန်သွားကြပါတယ်။ ဒီခေတ်ကာလ လက်နဲ့ရေးတဲ့ ကျမ်းစာများထက် ပိုမိုတိကျ၊ သေသပ်၊မြန်ဆန်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း တော်တော်သက်သာပါတယ်။ အဲဒီ ပထမဆုံး Gutenberg Bible 47 book ၄၇အုပ် အခုထိကျန်နေဆဲပါပဲ။ စာမျက်နှာအပြည်အစုံကတော့ ၂၁အုပ်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေဟာ တစ်အုပ်ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကနေ ၃၅သန်း တန်ဖိုးရှိနြေုပီဖြစ်လို့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဈေးအကြီးဆုံးစာအုပ်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဂူဒင်းဗတ် ကျမ်းစာ နဲ့ ဂျာရောမ် ကျမ်းစာ (လက်တင်ဘာသာ) ၂ခုကို အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူ ရနိုင်ပါတယ်။ ကာလာကော်ပီလုပ်ပြီး သိမ်းထားလိုသူများ အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဲ့ လင့်ခ်တွေ အများကြီးထဲက တစ်ခုကို ကြည့်ပါ။ (3)
John Wycliffe's (1324-1384) ဂျွန်ဝတ်ကလစ်ဖိုင် ဆိုသူ ပါမောက္ခတစ်ဦးက အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ကို အင်္ဂလန်မှာ သိမ်းဆည်းထားသူဆိုရင် အရှင်လတ်လတ်မီးရှို့သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ မာတင်လူတာ (1843-1546)ကတော့ ပရိုတက်စတင့်ခွဲထွက်ခဲ့တယ်။ ဂျာမန်ဘာသာနဲ့ ကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိုးမှုက တော်လှန်ရေးစတင်ခဲ့တယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်း ကြီးစိုးသောခေတ် ကုန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ ရိုမင်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးမှ လွတ်လပ်ခွင့်ကို လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် သမ္မာကျမ်းကို ဘာသာအားလုံးနီးပါးပြန်ကြတယ်။ လူအားလုံး ဘုရားနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ရသွားပါတယ်။ ဆုတောင်းခြင်းဟာ လူသားမှဘုရားထံသို့ စကားပြောခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဟာ ဘုရားပြောစကားကို နားထောင်ခြင်း လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘာသာပြန်ခြင်း၊ အနက်ဖွင့်ခြင်း များကိုတော့ ကျမ်းစာနားလည်သူ ဘုန်းတော်ကြီးသာလျှင် လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
အနောက်နိုင်ငံ ဘာသာစကားများမှာလည်း ကျမ်းစာဘာသာပြန်သူများစွာပေါ်လာပါတယ်။ အသင်းတော်တစ်ခု ကြီးမားလာလျှင် မိမိအသင်းသားများအတွက် အနက်ဖွင့်ကျမ်းစာများ သီးသန့်ထုတ်ဝေလာကြသည်။ ယခုခေတ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးမှာ ငွေကြေး၊ အချိန် သိပ်မကုန်တာကြောင့် လွတ်လပ်မှုကို လိုလားတဲ့အသင်းတော်များ ကိုယ်ပိုင်ကျမ်းစာအုပ်အသစ်များထွက်လာကြသည်။ Charismatic Movement (ဟာလေလုယ)ချီးမွမ်းခြင်းအသင်းတော်များ ၁၉၆၀ နောက်ပိုင်း ပရိုကတ်စတင့်အသင်းတော်များမှာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ၁၉၆၇ နောက်ပိုင်းမှာ ရိုမင်ကက်သလစ်အသင်းတော်များမှာ ပေါ်လာပါတယ်။ သီဆိုချီးမွမ်း၊ သက်သေခံခြင်း၊ စုပေါင်းအသံထွက်ဆုတောင်းခြင်း တို့အပြင် အခြားသောဘာသာစကားပြောဆိုတဲ့ Pentecostal အသင်းတော်များ များစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ခရစ်ယာန်များ လူဦးရေအားလုံးရဲ့ ၂၅ရာနှုံးအထိ လူဦးရေတိုးတက်လာပြီး တရုပ်၊ကိုးရီးယား နိုင်ငံများမှာတော်တော်ကျယ်ပြန့် လာပါတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ်ပိုင် ဘာသာပြန်ကျမ်းစာများ ထုတ်ဝေလာကြပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးက ဘာသာစကားအားလုံးနီးပါးသို့ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ The Book A History of Bible by Christopher De Hamel 2001-Print စာအုပ်မှာတော့ ဘာသာပြန်မှုများကို ရေးထားပါတယ်။ Wikipedia မှာလည်း ရှာနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနဲ့နီးစပ်တဲ့ အာရှလူမျိုး ဘာသာပြန်များပဲ အနည်းကျဉ်းဖေါ်ပြပါမယ်။ (4)
မြန်မာ။ အမေရိကန်လူမျိုး ဆရာကြီးယုဒဿန် Judson (1788-1850) မြန်မာဘာသာကို မူရင်း ဟီဗရူး နဲ့ ဂရိဘာသာတို့မှ ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ၊ပါဌိ အဘိဓါတ်ပြုစုခဲ့ပါတယ်။
ကချင်။ ဆွီဒင်လူမျိုး (အမေရိကန်နိုင်ငံသား) Ola Hanson (1864-1927) ကချင်ဘာသာ (ဓမ္မဟောင်း၊ ဓမ္မသစ် ၂ခုစလုံး) ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကချင်အဘိဓါန် ပြုစုခဲ့ပါတယ်။
ကရင်၊ First Sagaw Karen Bible, published in 1853
ရှမ်း၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို Rev. Cushing (အမေရိကန်နိုင်ငံသား) ဘာသာပြန်ပြီး 1882 မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ဓမ္မဟောင်းကိုတော့ Dr. Kirkpatrick ဘာသာပြန်ပြီး 1891 မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ (4a)
တမီးလ်။ ဂျာမန်လူမျိုး Johann Phillip Fabricuisu (1711-1791) သိရိလင်္ကာကို ၁၇၄၀မှာရောက်လာပြီး ဓမ္မသီချင်းများနဲ့ ကျမ်းစာတအုပ်လုံးကို ဘာသာပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်း။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး John Taylor Jones (1802 - 1852) ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အနှစ်၄၀ ကွယ်လွန်သည်အထိနေထိုင်ပြီး၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ဂရိဘာသာမှ ထိုင်းဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိူး William Carey (1761-1834) အိန္နိယနိုင်ငံသာသနာပြုဆရာဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂလားဘာသာ Bengali ၊ သက္ကတဘာသာ Sankrit ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အခြား အိန္နိယဘာသာများစွာလည်း ပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ တမီးလ် အဘိဓါန်ကိုလည်း ပြုစုခဲ့ပါတယ်။
တရုပ်၊ ဘုရားမရှိတဲ့ ကွန်မြူနစ်တရုပ်နိုင်ငံကြီးဟာ ကမ္ဘာလူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်း ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရလာတယ်။ ၁၉၉၀ တရုပ်ကွန်မြူနစ်များရဲ့ စီးပွားပြောင်းလဲမှုနောက်ပိုင်းမှာ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူ အံ့မခန်းတိုးပွားလာပါတယ်။ တရုပ်အစိုးရကတော့ ဘာသာရေးအဖွဲ့အားလုံးကို ချုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရတရားဝင်စာရင်းအရ ခရစ်ယန် ၁၅သန်းလောက်ပဲရှိသော်လည်း CIA Fact နဲ့တခြားသုတေသနပြုချက်များအရ သန်း၄၀ မှ ၁၃၀ အတွင်းမှာရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာ ဘာသာပြန်ခြင်းကိုလည်း အသင်းတော်အမျိုးမျိုးက လုပ်ဆောင်နေရပါတယ်။ အောက်ဖေါ်ပြပါများဟာ အချက်များအချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Catholic Bible: 1968 the New and Old Testaments were published inasingle volume. Protestant Bible: Prof. Ghazarian and Dr. Joshua Marshman the New Testament being published in 1813, and the whole Bible in 1822, by the liberality of the British and Foreign Bible Society. Same period in 1807 the Rev. Robert Morrison translation task was finished in November, 1819, published, in 21 volumes, in 1823. The next new translation was made by Walter Henry Medhurst, Karl Gutzlaff, and Elijah Coleman Bridgman. New Testament in 1835 ; translation of the Old Testament in 1840 and published by Gutzlaff. The committee, aided by several native scholars (principally the Chinese scholar Wang Tao), whole Bible completed in 1853 “The Delegates Version”. Anqing Beijing Mandarin versions was printed in 1864.
Recovery Version (聖經恢復本), 2003 (Watchman Ngee)
မြန်မာကျမ်းစာအုပ်များမှာ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာအုပ်များကဲ့သို့ Revision အမျိုးအစားများစွာမရှိသေးသော်လည်း ခေတ်ကာလလိုအပ်ချက်အရ အမျိုးအစားတော်တော်များများထုတ်ဝေလာ ကြပါတယ်။ ယခင်က နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ကက်သလစ်အသင်းတော်၊ အင်္ဂလိကန်၊ မက်သဒစ် စသည့်အသင်းတော်များလည်း မိမိအသင်းတော်နှင့်လျောက်ပတ်သော ကျမ်းစာများကို မြန်မာဘာသာပြန်ပြီး တိုင်းရင်းသားဘာသာအသီးသီးသို့လည်း ဘာသာပြန်ရတယ်။ ဆရာကြီးယုဒဿန်၏ ဟီဗရူး နှင့် ဂရိဘာသာမှ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ကျမ်းစာကို အသင်းတော်များစွာက အသုံးပြုနေကြတာ အနှစ်၂၀၀ ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာကျမ်းစာအုပ်များ အမျိုးအစားများစွာ ချီးမွမ်းခြင်းအသင်းတော်များခေတ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ မြန်မာများပြားစွာ ပြည်ပသွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ ခေတ်ကာလပါ။ ၁၉၈၈ခုနှစ်ကစတင်ပြီး မြန်မာများ ပြည်ပထွက်လာရင်း ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ဥရောပ၊အမေရိကားအထိ ပြန့်နှံ့လာချိန်မှာ ပြည်တွင်းပြည်ပ၊ မြန်မာမျိုးဆက်သစ် ခရစ်ယန်များ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အများစုကတော့ လက်ရှိ ဆရာကြီးယုဒဿန်ရဲ့ ကျမ်းစာကို သုံးစွဲနေတုန်းပါ။ အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာလည်း King James နဲ့ NIV အမေရိကန် ၂မျိုး လူသုံးများတဲ့အတွက် မြန်မာများလည်း ဆရာယုဒဿန်ကျမ်းစာ နဲ့ ခေတ်သစ်မြန်မာကျမ်းစာ ၂မျိုးကို မြန်မာကျမ်းစာအသင်းကိုယ်တိုင်မှ ထုတ်ဝေနေပါတယ်။ ကက်သလစ်မြန်မာအသင်းတော်ကလည်း သူတို့ဘာသာပြန်အဖွဲ့နဲ့ ကျမ်းစာထုတ်ဝေပါတယ်။ ကက်သလစ်ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ရင် အခေါ်အဝေါ်၊ စာလုံးပေါင်းတွေက မတူကြပါဘူး။ ပရိုတက်စတင့်ကျမ်းစာအသစ်တွေမှာတော့ ချီးမွမ်းခြင်း အစား ထောမနာပြုခြင်းလို့ ရေးထားတယ်။ ရွှေလင်းတကို လင်းယုန်ငှက် လို့ပြန်ရေးထားတယ်။ အညိုရောင် ကျမ်းစာသစ် (Judson The Eagle Version) တအုပ်လည်း ၂၀၀၇လောက်က ထွက်လာပါတယ်။ အောက်ခြေမှာ အပြန်အလှန်ကျမ်းကိုးများရေးသားထားပြီး၊ ကျမ်းစာမြေပုံများကို ရောင်စုံနဲ့ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဆရာယုဒဿန်ကျမ်းစာကို စာလုံးအနည်းငယ်လောက်ပဲပြောင်းပေးပါတယ်။ ခပ်ထူထူနဲ့ ကျမ်းစာတအုပ်ကတော့ မြန်မာပြည် Charismatic Churches တွေ တော်တော်သုံးကြပါတယ်။ မြန်မာလို သေသေချာချာ လေ့လာလိုသူများအတွက် အထူးအသုံးဝင်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်များ၊ ကျမ်းစာဖတ်နည်းများ၊ ကျမ်းစာသမိုင်းများ၊ မာတိကာ နဲ့ ကျမ်းညွန်းများ စုံလင်စွာ ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ဧ၀ံဂေလိ အသင်းတော်များလည်း သူတို့အသင်းတော်သုံးဖို့အတွက် မြန်မာဘာသာ၊ တိုင်းရင်းသားဘာ တစိတ်တပိုင်း ဘာသာပြန် အသုံးချနေကြပါတယ်။ အင်တာနက် မြန်မာကျမ်းစာကိုတော့ မြန်မာလူမျိုးများ သိပ်မသုံးကြသေးပါဘူး။ လက်ရှိ myanmarbible.com နဲ့ burmesebible.com နှစ်ခုစလုံး ဆရာကြီးယုဒဿန်ကျမ်းစာကိုပဲ အသုံးပြုထားပါတယ်။
အောက်မှာတော့ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ခေတ်သုံးမြန်မာ၊ ဂျပ်ဆင်မြန်မာ၊ ကက်သလစ်မြန်မာ .. အမျိုးအစား၃မျိုးဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ခေတ်သုံးမြန်မာကျမ်းစာဟာ အမေရိကန် NIV ကနေ တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထားတဲ့အတွက် ရှင်လင်းပြီး၊ လူငယ်များအတွက် မြန်မာခေတ်စကားနဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျမ်းပိုဒ်နံပါတ်များကို လက်ဝဲဘက်မှာ သီးသန့်ရေးသားထားတဲ့အတွက် ပိုမိုရှင်းလင်းစွာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ် အင်တာနက် နဲ့ iPhone, PDA တွေက ကောင်းလွန်းအားကြီးတော့ သမရိုးကျ စာအုပ်ကျမ်းစာ မကိုင်ချင်ဖြစ်လာကြတယ်။ အသင်းတော်တွေမှာလည်း ပရိုဂျက်တာတွေရှိနေတော့ ကျမ်းစာ နဲ့ ဓမ္မသီချင်းများကို ပိတ်ကားပေါ်ထိုးပြတဲ့အတွက် ကျမ်းစာအုပ်မပါပဲ ဘုရားကျောင်းသွားခြင်းလုပ်ကြတယ်။ စင်ကာပူက လူငယ်များစွာ သောင်းနဲ့ချီ ၀တ်ပြုစည်းဝေးပွဲတွေလုပ်တဲ့ ဘုရားကျောင်းကြီးတွေကို လာတတ်တဲ လူငယ်များလည်း လက်ထဲမှာကျမ်းစာအုပ် ကိုယ်စီကိုင်လာတာတွေ့မိပါတယ်။ တရားဟောဆရာကလည်း ပရိုဂျက်တာနဲ့ ပိတ်ကားပေါ်မှာထိုးပြပေမဲ့ ကိုယ့်ကျမ်းစာအုပ်ကိုတော့ ဘုရားကျောင်းယူလာဖို့မမေ့ပါနဲ့ လို့ စာအုပ်ကျမ်းစာကိုပဲ အားပေးနေတာတွေ့မိပါတယ်။
အသင်းတော်သင်းအုပ်ဆရာ တရားဟောချက်တခုမှာ .. လူငယ်တွေ ဘုရားကျောင်းလာချင်အောင် အတီး၊အမှုတ်၊အက Appetizers တွေအတွက် ငွေအကုန်ခံမယ်ဆိုပြီး လူကြီးတွေဆုံးဖြက်တယ်တဲ့။ ငွေသာကုန်သွားတယ် လူငယ်တွေ ဘုရားကျောင်းရောက်မလာဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားကျောင်းမှ ၀ိညာဉ်တန်ခိုးရှိရင် လူငယ်တွေလာမှာပါ ... ဆိုတာကြားယောင်မိပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော် နဲ့ မိဘများ မိတ်သဟာရဖြစ်ပြီးရင် သားသမီးများလည်း ကျမ်းစာဖတ်၊ ဘုရားကျောင်းသွား ဖြစ်လာမှာပါ။ ကျွန်ုပ်သား နေ့စဉ်ကျမ်းစာမဖတ်သေးသော်လည်း အချိန်တန်ရင် ဖတ်လာမှာပါ။ ကျမ်းစာကို အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းချင်လို့ အလွတ်ရပေမဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ထိတွေ့မှုအားဖြင့်သာ ရရှိပါတယ်။ ဆုတောင်းခြင်း၊ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့် အစပြုရပါတယ်။
ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပါစေ .. မြန်မာအများစုကတော့ ဆရာကြီးယုဒဿန်စာအုပ် (ဂျပ်ဆင်ကျမ်းစာ) ကို နှစ်များစွာဆက်လက်သုံးဦးမှာပါပဲ။
မူရင်း - မုရန်မဂ္ဂဇင်း
Posted by ellenshwe at 14:47
AWR Burmese (1)
16 - 01-12 တွင်စတင်သည်
သမ္မာကျမ်းစာ ( For Android )
သမ္မာကျမ်းစာ ကိုမိမိအန်ဒရိုက်ဖုန်းဖြင့်ဖတ်ရှုနိင်ပါတယ်။မြန်မာဘာသာ၊စကောကရင်ဘာသာ၊ချင်းဘာသာမျိုးစုံ၊ကချင်ဘာသာမျိုးစုံ၊၀ဘာသာ နှင့် အင်္ဂလိပ်လို ...
သမ္မာကျမ်းစာသမိုင်း အကျဉ်းချုပ် ခရစ်ယာန်တွေမှာ ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ ကျမ်းစာကို ရှေးက ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ယာဇ်ပရောဟိတ်များ နှုတ်နဲ့အာဂုံဆေ...
အပိုင်း - (၁) အပိုင်း - (၂)
မင်္ဂလာရှိသော မျှော်လင့်ချက် The Blessed Hope
အန်ဒရူး သော့ချက်ကျမ်းပိုဒ် ။ ၁သက် ၄း၁၆-၁၇ ဖတ်ရန်ကျမ်းပိုဒ် ။ တိ ၂း၁၁-၁၄၊ ၁သက် ၄း၁၃-၁၈ ချစ်မိတ်ဆွေ၊ ယေရှုခရစ်တော်တဖန်ပြန်လာပါဦးမည်။ ဒ...
*နော်မယ် (Normal)* ရမ်းကုတစ်ဦးသည် အပြင်းဖျားနေသော လူနာတစ်ဦးအား တာဝန်ယူကုသနေပြီး လူနာရှင်အမျိုးသမီးကိုလည်း မစိုးရိမ်ရန်နှင့် မကြာမီပျေ...
ယောရှု ၁း၈ ထိုပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်း ကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကိုမဘတ်မရွတ်ဘဲမနေ၊ နေ့ညဉ့်မပြတ်ကြည့်ရှုဘတ်ရွတ်...
မလေးရှားရောက် မလေးငယ်ဆိုသော မြန်မာမိန်းမပျိုလေး၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.. (Feel free to Share) အစ်ကိုတို့ရေ အစ်ကိုတို့ကို ညီမအနေနဲ့...
Adventist World Radio Myanmar